गणितीय-प्रेम | PRAKASH ANGDEMBE
. . . an official site of Prakash Angdembe
सायदै जीवनदेखि पछाडी सवैभन्दा बढी परिभाषा बनेको छ भने प्रेमको बारेमा बनेको छ । हाँसो, खुशी, पीडा, मिलन आदि प्रेमको परिभाषामा आउने गर्छन् । उसो त जसले प्रेमको परिभाषा तयार गरेँ आफुले भोगेको भोगाइको अनुकुल गरेँ । पाउनेले प्राप्ती भने । गुमाउनेले त्याग भने । रमाउनेले खुशी भने, रुनेले पीडा भने । सबै आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण मात्र हो । संसारलाई हामी कसरी हेर्छौ, हामीले कस्तो फिल गर्छौ त्यही अनुरुप व्याख्या गर्ने हो । आज हामी प्रेमका उदाहरण दिँदा रोमियो जुलियट, लैला मजनु, मुनामदन, आदिको उदाहरण दिन्छौँ । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यी कथाहरु प्रेमका वास्तविक घटाहरु हैनन् । कविहरुको प्रेम कल्पना मात्र हो । प्रेमका बारेमा यत्तिका कृति लेख्ने स्वयम् लेखकहरुले प्रेमलाई कसरी बोध गरे त्यो चाही गौण मात्र रह्यो । मानवीय स्वभाव विचित्रको छ । पाएको कुरालार्ई भोग्न, आनन्दित हुन विर्सन्छ र जे आफुसँग छैन त्यसको तृष्णामा छट्पटिन्छ । संभवत परिभषा सृजना गर्नेहरुले पनि आफुसँग भएको प्राप्तीभन्दा पनि बढी नपाएको, गुमाएको पीडामाथि गरेँ । मनोविश्लेषक फ्रायड भन्छन् “हामीले जे कुरा गर्न पाएका छैनौ, हामीसँग चाहेर पनि उपलब्ध छैन । मनले त्यो क्षतिपुर्ती कहीँ, कतैबाट पुर्ती गर्ने काम गर्छ ।”
प्रसँग प्रेमको । प्रेमले कुनै माग राख्दैन । प्रेम भनेको स्विकार भाव हो । धार्मिक दार्शनिकहरु भन्छन् परमात्मासम्म पुग्ने एकमात्र मार्ग भनेको प्रेम हो । थाहा छैन यो भनाइमा कतिको सत्यता छ तर जीवनको लागि प्रेम अपरिहार्य हो । साँच्चै प्रेम कसैलाई गरिन्छ भने उसको हरेक कुरा पे्रमिल लाग्छ रे । उसको बोली, व्यवहार, शैली, सवै सवै प्रिय लाग्छ रे । तर हामीहरु प्रेमभन्दा बढी व्यपार गर्छौ । हाम्रो प्रेम गणीतिय प्रेम हो । हामी सम्झन्छौँ, हामीले प्रेम गर्ने पुरुष अथवा स्त्रीमा कस्तो गुण छ । के के विशेषता छ । उसलाई मैले अपनाए भने के फाइदा होला प्युचरमा । मान्छेले के भन्ला ? आदि सोच्छौँ । के यो गणित हैन र ? श्रीमान श्रीमतिहरुमा त झन् यौनको नाता नहुनु हो भने धेरै परिवार हप्तादिन पनि टिक्दैन । हरेक शहरका हरेक भट्टीहरुमा, होटलहरुमा प्रत्येक वेलुका मेला लाग्ने गर्छ । यसमा असी प्रतिशत विवाहित पुरुष, समाजका भद्र भलाद्मी भनाउँदाहरुको बाहुल्य हुने गर्दछ । यदी घरमा श्रीमतिहरुले हिसाव, मागरहित प्रेम गरेका भए किन यसरी श्रीमानहरु भट्टी र परस्त्रीमा चाहारिन्थे । ठिक विपरित श्रीमानहरुले समय दिए, प्रेम गरे किन श्रीमतीहरु छिमेकीको कुरा काट्ने, टेलीसिरियलमा अलमलिने, परपुरुषसँग समय नजिक हुने समस्यामा फस्थे । मन्दिरमा किन हज्जारौँ भक्तजनको भीड लाग्थ्यो । मन्दिर र भट्टीमा के फरक छ । दुवै मन अशान्ती भएपछि जाने ठाउँ न हो । प्रेम घरपरिवारवाट हराएपछि मनलाई शान्त बनाउन मानिशहरु तीर्थधाम चहार्छन । यदी प्रेम हामीमा भए बगर पनि बगैचा लाग्नु पथ्र्यो । घर पनि मन्दिर लाग्नु पथ्र्यो । श्रीमान, श्रीमती प्रेमको प्रतिक लाग्नु पथ्र्यो । प्रत्येक पल स्वर्ग लाग्नु पथ्र्यो । के हामीमा यी सब छ त ?
हाम्रो समाजमा त प्रेम छैन । व्यापार मात्र छ । नाफा नोक्सान मात्र छ । खोक्रो सम्झौता छ । यौनको चाहान मात्र छ । चिहान जत्तिको घर छैन । चिहानमा शान्ती छ, घरमा अशान्ती । समाजले केही भन्लाकि भन्ने कुण्ठा छ । प्रतिवाद गर्न नसकेको आजीवन हार छ । एक्लै जिउने र मर्ने हिम्मत नभएर मात्र बाँचेका छौँ प्राय हामीहरु ।
यी सवैको कारण प्रेमको गणितीय रुप हो । मतलबी अवस्था हो । हामी समग्रतालाई स्वीकार्नु चाहादैनौँ । इश्वर, प्रकृति भनेको समष्टी भाव हो । हामी संसारलाई आफु अनुकुुल बदल्न चाहान्छौँ । अरुलाई आफु जस्तै भएको हेर्न चाहान्छौँ । छोराछोरीलाई आफु जस्तो । श्रीमान श्रीमतीलाई आफु जस्तो । प्रेमी प्रेमिकालाई आफु जस्तो बदल्न चाहान्छौ । जुन असम्भव थियो, छ र हुनेछ । कोही पनि बद्लिएर अर्को बन्न सक्तैन । हामीले दोस्रोलाई उसकै प्रकृतिमा स्विकार्न नसक्दा नै अहिलेको समाज, पे्रमरहित भएको हो । कलह, त्रासदी, मानवीयता हिन समाज सवै सवै गणितीय प्रेमको उपज हो ।
सम्भवत केही आमाबाबाको प्रेम वाहेक बाँकी सबै प्रेमहरु गणितीय नै होलान् ।
Tags: Articleगणितीय प्रेमPrakash
Nischal says:	December 17, 2012 at 3:59 pm	Mama this article is really awersome ,if all people of this world read this article n use it in this life , the earth will be know as the world of love. Mama I luv this article , I think u dissolve this type of article in furture .BEST OF LUCK
रुबाइ(एकबचन), रुबाइयात(बहुवचन) फारषीभाषाको लोक लय भएता पनि यसलाई मलजल र अग्लो सृजनात्मकता दिने काम उमर खैयामले गरे। रुबाइको अध्यन गर्दा उमर खैयामलाई अध्यय्न नगरी पूर्णता पाउन सक्तैन। गणितिज्ञ, ज्योतिषविद, खगोलशास्त्री, दार्शनिक, वातावरणविद्, भूगोलविद्, इन्जिनियर, संगीतज्ञ, खनिजविद्, बातावरणविद, कवि आदि विविध विधाका महान प्रतिभा हुन उमर खैयाम (पर्सियन सन्१०३८–११३१)। उनको पूरा नाम Ghiyath al-Din Abu’l-Fath ‘Umar ibn Ibrahim Al-Nishapuri al-Khayyami हो आजभन्दा लगभग हजार वर्ष(हालको इरान) पहिले निशापुरमा जन्मिएका। उनको बाल्यकाल बाल्ख (हाल अफगानिस्तानको उत्तरी भूभाग) मा वितेको थियो भने खैयामले समरकन्ड(हालको कायरो र बगदाद) मा शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनले विशेष (गणितमा) अलजेब्राको आधुनिकिकरण र आधुनिक क्यालेन्डरको स्थापना गरेका थिए। आफ्नो समयअवस्थामा उनलाई संसारको दार्शनिक भनेर पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
Copyright © prakashangdembe @ 2003 - 2013	Theme by ThemeZee